2Cor 1 | Shona | STEP | Pauro, muapostora waKristu Jesu, nokuda kwaMwari, naTimotio, hama yedu kukereke yaMwari iri paKorinte, pamwe chete navatsvene vose vari paAkaya yose:
1 Pauro, muapostora waKristu Jesu, nokuda kwaMwari, naTimotio, hama yedu kukereke yaMwari iri paKorinte, pamwe chete navatsvene vose vari paAkaya yose: 2 Nyasha ngadzive nemi, norugare runobva kunaMwari, Baba vedu, naShe Jesu Kristu.
3 Mwari ngaavongwe, ivo Baba vaShe wedu Jesu Kristu, Baba vengoni, Mwari wokunyaradza kwose; 4 iye unotinyaradza pakutambudzika kwedu kwose, kuti isu tive nesimba rokunyaradza vari mukutambudzika kupi nokupi, nokunyaradzwa kwatinonyaradzwa nako naMwari. 5 Nokuti madambudziko aKristu se zvaakava mazhinji kwatiri, saizvozvo vo kunyaradzwa kwedu kwakava kuzhinji naKristu. 6 Zvino kana tichitambudzika hedu isu, zvinoitwa nokuda kwokunyaradzwa nokuponeswa kwenyu; kana tichinyaradzwa isu, zvinoitwa nokuda kwokunyaradzwa kwenyu, kunokusimbisai kutsungirira pamadambudziko iwayo atinotambudzika vo nawo. 7 Tariro yedu pamusoro penyu yakasimba, nokuti tinoziva kuti sezvamunosongana nesu pamadambudziko, saizvozvo vo pakunyaradzwa. 8 Nokuti hatidi, hama dzangu, kuti murege kuziva kutambudzika kwakatiwira paAsia, kuti takaremerwa kwazvo-kwazvo kukunda simba redu, nokudaro takarasha moyo tichiti hatingararami; 9 asi pamoyo pedu isu takanga tatozvitongera rufu, kuti tirege kuvimba nesimba redu, asi naMwari unomutsa vakafa; 10 iye wakatisunungura parufu rukuru rwakadai, vuye uchatisunungura; Iye watinovimba kuti unotisunungura; 11 nemivo muchibatsirana pakutikumbirira kwenyu, kuti vanhu vazhinji vavonge pamusoro pedu nokuda kwechipo chedu chenyasha chatakapiwa nokunyengetera kwavazhinji.
12 Nokuti kuzvirumbidza kwedu ndikoku: Kupupura kwehana yedu, kuti takafamba panyika, zvikuru kwamuri, novutsvene nezvokwadi yaMwari, tisingafambi novuchenjeri bwenyama, asi nenyasha dzaMwari. 13 Nokuti hatikunyoreriyi zvimwe zvinhu, asi izvo zvamunorava nezvamunotenda; ndinoti dai muchizvitenda kusvikira pakuguma; 14 sezvamakatitendavo panezvimwe, kuti isu tiri kurumbidzwa kwenyu, semivo muchava kurumbidzwa kwedu nezuva raShe Jesu.
Pauro wakaregerei kuenda Korinte
15 Ndichiziva izvozvi, ndakanga ndichida kutanga kuvuya kwamuri, kuti mukomborerwe rwechipiri; 16 ndipfuvure nokwenyu ndichienda Makedhonia, nokuvuya nokwenyu zve, ndichibva Makedhonia, ndiperekedzwe nemi ndichienda Judhea. 17 Zvino zvandakanga ndichida kuita izvozvo, ndakaita nokushanduka moyo here? Kana, zvandinoda kuita ndinozvida nenyama here, kuti ini pamwe nditi: Hongu, hongu, pamwe: Kwete, kwete? 18 NaMwari wakatendeka, shoko redu kwamuri harizi hongu nakwete. 19 Nokuti Mwanakomana waMwari, Jesu Kristu, uyo wakaparidzwa pakati penyu nesu neni naSirivhano naTimotio wakanga asiri hongu nakwete, asi wakanga ari hongu maari. 20 Nokuti zvipikirwa zvaMwari kunyange zviri zvizhinji sei, maari ndihongu; naizvozvo naiye vo ndiAmeni, kuti Mwari akudzwe nesu. 21 Zvino, uyo unotisimbisa munaKristu pamwe chete nemi, nokutizodza, ndiMwari; 22 uyo wakatiisira vo chisimbiso, akatipa rubatso rwoMweya mumoyo medu. 23 Asi ndinodana Mwari, ave chapupu pamoyo wangu, kuti handina kuzovuya Korinte, nokuti ndakakunzwirai tsitsi. 24 Hatiiti simba nokutenda kwenyu, asi tinokubatsirai kuti mufare; nokuti mumire nokutenda.